Iskuqor Liistadeena Boostada • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Ku soo biir DutchtownSTL liiska boostada ee dhacdooyinka Dutchtown, wararka, iyo macluumaadka laguugu soo gudbiyo sanduuqaaga! Waxaan kaliya u dirnaa laba ama seddex emayl bishii, wax weyn maahan.
Waxa kaliya ee aan u baahanahay waa magacaaga iyo cinwaanka emaylkaaga. Haddii aad jeclaan lahayd inaad bixiso macluumaad dheeri ah, si xor ah u samee hoosta. Inaan si fiican kuu barto waxay aadi kartaa waddo dheer si ay nooga caawiso inaan si wax ku ool ah ula macaamilno deriskeenna.
Waxyaabaha noocee ah ayaad jeceshahay inaad ku tabarucdo?
Naqshadeynta: hantida jirka, meelaha caamka ah, dadaallada amniga, nadiifinta Muhiimadda Dhaqaalaha: taageeridda ganacsiyada, soo jiidashada maalgashiga, raadinta horumarka Abaabul: lacag ururin, qorista deeqaha, shaqaalaysiinta mutadawiciinta Gudbinta: qorshaynta iyo isku dubaridka dhacdooyinka, dejinta iyo degitaanka, ka shaqeynta deriska iyo martida Calaamadee wax kasta oo khuseeya. Ma jiraan wax waajib ah ama ballanqaad ah.
Ma haysaa faallooyin kale oo aad jeclaan lahayd inaad ku darto?
Waad ka bixi kartaa wakhti kasta. Haddii aad wax su'aalo ah ama walaac ah qabtid, fadlan xor u noqo nala soo xiriir.
DutchtownSTL.org Saxeex Liistadayada Boosta